သူမကိုပိုစ့်တင်ပြီး​ြဖဲနေတဲ့အဖေ့ဘက်က အမျိုးဆိုတဲ့တယောက်ကို ဒဲ့ပြန်ဝုန်းလိုက်​​ပြန်သော ခင်ရူပ – MC Tv Club
သူမကိုပိုစ့်တင်ပြီး​ြဖဲနေတဲ့အဖေ့ဘက်က အမျိုးဆိုတဲ့တယောက်ကို ဒဲ့ပြန်ဝုန်းလိုက်​​ပြန်သော ခင်ရူပ
မော်ဒယ်လ်ခင်ရူပကတော့ မြန်မာပလာဇာမှာ မွေးနေ့ပွဲကျင်းပခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ရူပက သူမရဲ့ မွေးနေ့ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့အမျိုးလို့ဆိုသူတစ်ယောက်က “မြန်မာပလာဇာမှာ
မွေးနေ့လုပ်တာ ကျွန်တော့်ဆွေမျိုးလို့မပြောနဲ့။ ဒဲ့ရွံတယ်။ ကျွန်တော်တို့အမျိုးထဲ စုန်းပြူးပါရင်ထားခဲ့မယ်” ဆိုပြီး တင်ခဲ့တာကြောင့် ခင်ရူပကပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ခင်ရူပက “အဖေဘက်က အမျိုးဆိုဘဲ ငါတောင်သိမနေဘူး။
မြင်တောင်မမြင်ဘူးဘူး။ လာစော်ကားသေးတာ။ ေ-ာက်မျိုးဆို သိပ်ရွံတာ father side ဆိုပိုဆိုး။ broken family နော် 14 နှစ်ထဲက ဖအေ ထားသွားလို့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ကျောင်းလာတာ။ အမျိုးဆိုပြီး ဝင်နာ ဝင်ဝုန်း လို့ နင့်လည်းငါမြင်တောင်မမြင်ဘူးနေဘူး။
ရွံစရာ၊ ဆွေမျိုး ဆိုတဲ့စကားမသုံးနဲ့ ငါ အဖေနဲ့ မပက်သက်တာ ဆယ်ကျော်သက်ထဲက နင်သိဘို့ေ-ာက်မျိုးတွေ အဖေ side ရော အမေ side ရော wedding တောင်မဖိတ်တာ idfc ပါဆို စောက်မျိုးဆိုတာ ငါ့ဘဝမှာ ဘာအကျိုးမှ မပေး!! ေ-ာက်မျိုး သိပ်ရွံသောကျမ”
ဆိုပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခင်ရူပကတော့ သူမကိုယ်တိုင်တောင်သမိတဲ့ အဖေဘက်ကအမျိုးဆိုသူရဲ့ လူသိရှင်ကြားစော်ကားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အတွက် သူမကလည်း စိတ်ဆိုးစွာနဲ့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်
ေမာ္ဒယ္လ္ခင္႐ူပကေတာ့ ျမန္မာပလာဇာမွာ ေမြးေန႕ပြဲက်င္းပခဲ့တာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ေဝဖန္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခင္႐ူပက သူမရဲ႕ ေမြးေန႕ပြဲနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးသူမရဲ႕အမ်ိဳးလို႔ဆိုသူတစ္ေယာက္က “ျမန္မာပလာဇာမွာ
ေမြးေန႕လုပ္တာ ကြၽန္ေတာ့္ေဆြမ်ိဳးလို႔မေျပာနဲ႕။ ဒဲ့႐ြံတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အမ်ိဳးထဲ စုန္းျပဴးပါရင္ထားခဲ့မယ္” ဆိုၿပီး တင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခင္႐ူပကျပန္လည္တုံ႕ျပန္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ခင္႐ူပက “အေဖဘက္က အမ်ိဳးဆိုဘဲ ငါေတာင္သိမေနဘူး။
ျမင္ေတာင္မျမင္ဘူးဘူး။ လာေစာ္ကားေသးတာ။ ေ-ာက္မ်ိဳးဆို သိပ္႐ြံတာ father side ဆိုပိုဆိုး။ broken family ေနာ္ 14 ႏွစ္ထဲက ဖေအ ထားသြားလို႔ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ေက်ာင္းလာတာ။ အမ်ိဳးဆိုၿပီး ဝင္နာ ဝင္ဝုန္း လို႔ နင့္လည္းငါျမင္ေတာင္မျမင္ဘူးေနဘူး။
႐ြံစရာ၊ ေဆြမ်ိဳး ဆိုတဲ့စကားမသုံးနဲ႕ ငါ အေဖနဲ႕ မပက္သက္တာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ထဲက နင္သိဘို႔ေ-ာက္မ်ိဳးေတြ အေဖ side ေရာ အေမ side ေရာ wedding ေတာင္မဖိတ္တာ idfc ပါဆို ေစာက္မ်ိဳးဆိုတာ ငါ့ဘဝမွာ ဘာအက်ိဳးမွ မေပး!! ေ-ာက္မ်ိဳး သိပ္႐ြံေသာက်မ”
ဆိုၿပီးျပန္လည္တုံ႕ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ခင္႐ူပကေတာ့ သူမကိုယ္တိုင္ေတာင္သမိတဲ့ အေဖဘက္ကအမ်ိဳးဆိုသူရဲ႕ လူသိရွင္ၾကားေစာ္ကားျခင္းကိုခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ သူမကလည္း စိတ္ဆိုးစြာနဲ႕ ျပန္လည္တုံ႕ျပန္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခရက္ဒစ္
Previous Article သူ့ပုံအားရုပ်ပြောင်ပုံတွေလုပ်ပြီးအသုံးပြုနေသူများကို ပြတ်ပြတ်သားသားပြောချလိုက်သော သရုပ်ဆောင်ခင်မို့မို့အေး
Next Article သူမရဲ့ကလေးတွေအတွက်သိန်းထောင်ချီတန်တဲ့ တိုက်ခန်းကြီးလှူပေးသူကိုကျေးဇူးတင်နေရှာသော ခိုင်နှင်းဝေ